IBSA QEERROO WALLOO; Bahaardaar keessatti manneen gubatan; hokkara kotobe – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooIBSA QEERROO WALLOO; Bahaardaar keessatti manneen gubatan; hokkara kotobe
Naannoo Amaaraa magaalaa Bahaardaar keessatti manneen daldalaa dhalattoota #Guraagee tahan 20 ol tahanii fi hoteelonni 3 ibiddaan gubachaa jiru.
Hardha guyyaa #DrBirhaanuuNaggaa Xiqqeessanii ofirraa ari’an.
Gareen maqaa Amaaran of ijaaree socho’aa jiru #ABN sabni biraa jiraachuu hin qabu jechuun gochaa duguuggaa sanyii abboonni isaanii raawwachaa turan raawwachuuf deemaa jira.
#Fincaan Minilik Finfinnee Yuuniversiitii Kotobee keessatti.
Nama keenyatu bilisoomneerra jedhee of sobe malee jarri erga gaafa Minilik Oromoo fi Oromiyaa kolonii tolfatee tarsimoo qarachuu malee takkaa rafaniis of sobaniis hin beekani.
Tarsimoon isaanii inni bara baay’ee itti milkaa’an Oromoo Oromoon cabsuudha. Har’allee jarri kanummatti dhimma bahaa jiru. ODP dahoo fi golgaa tolfatanii ABO/WBO hiikkachiisuun Oromoo fi Oromiyaa moonaa Ethiopianisim keessatti to’achuudha.
Ilmaan Minilik har’as lola bifa qindaa’een Magaalaa fi baadiyyaatti tuffii, gadi aantummaa fi jibba sanyummaa Oromoo irraa qaban ifatti Finfinnee moonaa University Kotobee keessatti agarsiisaniiru.
Nuti beekaa fi wallaalaan walirratti duulla, diinni keenya madaa nuti wal madeessinu babal’isa. Nuti qawwee walirraa hiikuutti yeroo gubna, diinni keenya gaafas harka rukutaa Ofii qawwee bitee hanga funyaaniitti wal hidhachiisa.
Nuti arrabaa fi doorsisaan walitti dhaadanna, diinni keenya kolfa mormaa oliin tokko deeggaree kaan balaaleffataa ibidda nuti walitti qabsiifnetti beenzila firfirasa.
Madaa Mogolee walitti taanee sochii diinaan durfamuu dhiifnee, hireen ummata Oromoo dhiigni Qeerroof Qarree itti lola’e , lubbuun hayyoota kumaaf kitilaa itti bahe akka hin dukkanoofne dhagaa waliif darbachuu yoo dadhabne walirratti darbachuu dhiifnee hireen ummata Oromoo ummata Oromoon akka murtaayu yeroon itti wal taanu har’a malee yoomiree ????
‘IBSA QEERROO WALLOO IRRAA KENNAME..!
HUBACHIISA OROMOO WALLOOF..!
Godina Oromoo Walloo
Hammachuu Qofa Mitii Hambisuus hin wallaallu
-Yoo mirgi seeraan nuuf kenname hin kabajamne, Qeerroon SANUMAAN of kabachiisuuf dirqama. Jibbaa keenya ifatti lallabaa, nu arabsaa, nu xiqqeessaa, biyya keenya jaalatanii nu jibbuun hin taatu. Kanaan dura maqaa simannaa jedhuun godina keenyaan alaa wal guuranii dhufanii jecha isaan nuun jechaa turan ni beekna. Lammata nutti hin deebihu jechuun waan hunda liqimsine, Qeerroos qabnee qabbaneessine turre san garuu gawwummaa seehuun ofiifuu gowwummaadha, seerri kabajamuu males hin kabajamne, jarri ammas jibbaa keenya waa meeqa maxxansaa jiru. Garuu akka kanaan duraa san nurratti sirbuun hin taatu, abbumma godina keenyaa kara deemtuun nuuf hin kennine, nurraahis fudhachuu hin dandahan. Maqaa waldaa dargaggootaa jedhuun Gondorii hamma Gojjaam, shawaa kabatii hanga kaaba walloo waamichi taasifamaa jira, haa waamanii garuu dhiira asi dhufee nurratti dhiichisu ni laalla, waan badettu bada malee abadan hin ajjetamnu. Kombolcha, Dasee ykn magaalaa itti dhiyaatutti waan fedhan gochuu mirga qaban, garuu Kombolcha irra darbanii Kamisee dhufuun keeyriifi miti. Dhimma godina keenyaa ijjennoo keenyan ala abbaan fedhe nuuf murteessuu hin dandahu. Abbummaa godina keenyaa nurratti argisisuun olaantumma isaanii argisiisuu yaaduun gowwummaadha mootummaanis garee hookkoraaf as wal guurtu tana likki likki itti himuu qaba. Ibbidda dibaadhaan jiru kana yoo irraa saaqne gaazas bituu nun feesisu harkuma keenya jiraa.
IBSA EJJENNOO QEERROO WALLOO Nuti Qeerroon Bilisummaa saba Oromoo Walloo gidiraaf roorrifama uummatni keenya keessatti…